Bichar Khabar » परामर्श व्यवसायमा धराैटि र विदेशी लगानी अावश्यक छैन
18 Sep 2018 04:09:54 PM | No Comments
सरोज थापा,निर्देशक,निमास एजुकेशन
अहिले शिक्षा मन्त्रालयले परामर्श व्यवसायीलाई साखा कार्यालय खोल्न रोक लगाएको छ र धरौटी पनि राख्नुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ के भन्नुहुन्छ ?
शिक्षा मन्त्रालयले परामर्श व्यवसायीलाई साखा कार्यालय खोल्न दिनुपर्छ । एउटै कम्पनीको मातहतमा रहेर परामर्श व्यवसायीले साखा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्छ ।यो सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्र भएकाले यसलाई धरौटी राख्नुपर्ने आवश्यकता नै हुदैन । विद्यार्थीले आफू अध्ययन गर्न जाने कलेजमा आफूले नै शूल्क तिरेर जाने भएकाले परामर्श व्यवसायीको धरौटिको आवश्यकता नै हुदैन । सम्वन्धीत देशको शिक्षा नीतिमा भर पनुपर्ने भएकाले विद्यार्थीको सहजताका लागि परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न नियमावली र निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्दै लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।
परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी आवश्यक छ कि छैन ?
परामर्श व्यवसायमा विदेशी लगानी वा फ्रेन्चाइज कम्पनिको आवश्यकता नै छैन । नेपालबाट परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरु नै सक्षम छन् र विदेशी विश्वविद्यालय संग समन्वय गरेर अघि बढेका छन् । विदेशी कम्पनिको ध्यय नेपालमा आएर व्यवसाय गर्ने अनि कमाउने र पैसा विदेशमा लैजाने नै हुन्छ ।यसले राज्यलाई पनि घाटा पु¥याइरहेको हुन्छ भने ति कम्पनिहरु कुनै पनि वेला उठेर जान सक्ने खतरा हुन्छ । सिमित व्यक्तीको स्वार्थका लागि विदेशी कम्पनि नेपालमा आउन दिनु हुँदैन । यो उद्योग नभएर सेवा क्षेत्र हो ,राज्यले विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरु छुट्टाउन आवश्यक छ ।
मेडिकल शिक्षा आर्जन गर्न नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालबाहेक उपयुक्त गन्तव्य कुन कुन देश हुन सक्छ ?
नेपालबाट मेडिकलको प्रवेश परिक्षा उत्तिर्ण गरेका नेपाली विद्यार्थीका लागि उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्य भनेको चाइना, फीलिपीन्स, बङ्लादेश नै हो तर नेपालमा त्यहाँको मेडिकल शिक्षाको मान्यता र उक्त देशमा आफू जाने मेडिकल कलेजको अवस्थाको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ । विशेष गरेर विद्यार्थी उक्त कलेज अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउन अनुमति प्राप्त हो कि होइन ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले तपाईहरुले चिनमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई कस्तो योजना ल्याउनुभएको छ ?
चिनमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ,८० प्रतिशत भन्दा बढि अंक ल्याएकालाई चाइनीज सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृित्तमा सहभागी गराउनुका साथै उनीहरुलाई भाषा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने,८० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याएकालाई पनि २० प्रतिशत देखी सतप्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ ।चाइनिज भाषामा अध्ययन गर्नेका लागि चाइनिज भाषा परिक्षा उत्तिर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ भने अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन हुने कलेजमा अंग्रेजी भाषा परिक्षा टोफल , आईईएएलटिएस उत्तिर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीहरुले बजारमा देखिने परामर्श व्यवसायीको भिडमा कस्तो परामर्श व्यवसायी छनोट गर्नुपर्छ ?निमास कस्तो संस्था हो ?
विद्यार्थीले संस्थाको पृष्ठभूमि, उसले कुन,कुन सरकारी एवं गैरसरकारी निकायबाट सेवा सञ्चालन स्विकृति पाएको छ । सम्बन्धीत देशका लागि काम गर्न योग्य परामर्श व्यवसायी हो कि होइन ,सत्य तथ्य जानकारी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रशिक्षित परामर्शकर्ता,संस्थाको विगतको अनुभव ,उसले प्रतिनिधीत्व गर्ने विश्वविद्यालयका बारेमा ध्यान दिएर मात्र परामर्श व्यवसायी छनोट गर्नुपर्छ ।निमास परामर्श व्यवसाय क्षेत्रमा अईएसओ ९००१ः२००८ सर्टिफाइड कम्पनि हो । यो नेपालमा परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अग्रपक्तीमा रहदै आएको छ । निमासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय परामर्श सेवा संगै तयारी कक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निमासलाई विभिन्न विदेशी शैक्षिक निकायहरुले सर्टिफाइड गरेको छन् । निमास स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ फेकनको सदस्य हुनुका साथै विद्यार्थीको रोजाईमा परेको परामर्श सेवा केन्द्र हो । यस संस्थाकै प्रतिनिधी अहिले फेकनको बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । बजारमा देखिने थुप्रै परामर्श व्यवसायीहरुको भिडमा अलग पहिचान बनाउन सफल निमासले विदेश अध्ययनका विषयमा विद्यार्थी एंव अभिवाकलाई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।